May ny bloc 2 tao amin’ny Onivesiten’i Mahajanga : nifanafika ny samy mpianatra, 4 naratra, 2 voasambotra | NewsMada
May ny bloc 2 tao amin’ny Onivesiten’i Mahajanga : nifanafika ny samy mpianatra, 4 naratra, 2 voasambotra
Par Taratra sur 18/05/2016
Samy mpianatra ao amin’ny Oniversiten’i Mahajanga ao Ambondrona ihany ireto nifanafika, omaly ireto. Andaniny, ireo andiana mpianatra avy any Mandritsara nahatratra 300, ankilany, ireo avy ao Mahajanga miisa 80 eo ho eo. Ankoatra ireo fitaovana potika, kilan’ny afo ny efitrano roa fonenan’ny mpianatra. Efatra no naratra, mpianatra roa kosa nosamborin’ny mpitandro filaminana.
Raikitra ny gidragidra tao amin’ny oniversiten’i Mahajanga, Ambondrona, omaly tamin’ny 11 ora maraina. Nifanafika ny mpianatra avy any Mandritsara sy Mahajanga, io omaly maraina io, ary nifamono sy nandoro ny trano fonenany ny roa tonta.
Vokany, mpianatra efatra naratra mafy tsy maintsy naiditra hopitaly any Androva, roa voasambotra izay mpianatra avy any Mandritsara. Trano fonenan’ny mpianatra (bloc) roa no may.
Araka ny vaovao avy amin’ny tompon’andraikitry ny serasera faritra Boeny, fifandirana teo amin’ny fikambanan’ny mpianatra avy any Mahajanga sy ny mpianatra avy ao Mandritsara, faritra Sofia, samy mipetraka ao amin’ny Campus no nahatonga ny olana.
Ny herinandro lasa teo raha ny voalaza, nanimba fantson-drano mandeha any amin’ny trano itoeran’ireo avy any Mahajanga ny mpianatra iray amin’ireo avy ao Mandritsara. Nisy fifamaliana tamin’izany, izay narahina fifanarahana fa hosoloin’ireto nanimba ilay fantson-drano simba.
Omaly anefa, tamin’ny 9 ora maraina no nifanarahan’izy ireo fa hanoloana azy io. Tonga avy any anefa ireo mpianatra terak’i Sofia, miisa eo amin’ny 300 eo ho eo, miaraka amin’ny fitaovana enti-miady sy ny vato, hanafika ireo mpianatra terak’i Mahajanga miisa eo amin’ny 80 eo ho eo. Tsy nisy ny fifandaharana fa raikitra avy hatrany ny fifandonana. Be noho ny vitsy ireo mpianatra ankilana. Na izany aza, tsy nanaiky resy ka izao niafara tamin’ny faharatran’ny andaniny sy ankilany izao.
Tsy nijanona teo amin’ny fifandonana fa nandoro trano ihany koa ireo mpianatra andaniny sy ankilany. “Bloc” roa no may, ka ny iray simba tanteraka, na nalaky aza ny fahatongavan’ny mpamono afon’ny faritra Boeny sy an’ny kaomina ambonivohitr’i Mahajanga.
Tonga teny ny Emmo/Reg nandamina ireo mpianatra, nampiasa hery ary nisambotra vao tony ireo nifandona. Nidina tany an-toerana ihany koa, omaly hariva, ireo solotenam-panjakana tarihin’ny lehiben’ny OMC (Organisation mixte de concéption) eto Mahajanga nijery ny fahavoazana sy nitondra fandaminana. Nampivory ireo mpianatra izy ireo omaly hariva ary nisy ny fifanarahana natao.
Toe-javatra mahalana vao miseho ny fifandonan’ny mpianatra tahaka izao eny amin’ny oniversite. Matetika miray hina ireo mitaky tombontsoa, kanefa kosa mifandona rehefa manohintohina ny faritra niaviany avy. Soa ihany fa voaravona ny disadisa, fa ny favoazana no tena betsaka.